विचार अलि उग्रवादी देखिन सक्छ तर सोचनीय पनि हुन सक्छ— अब कस्ता विश्वविद्यालय बन्नुपर्ला ? सीपमूलक शिक्षालाई साँच्चैको रोजगारीमूलक बनाउन के गर्नुपर्ला ? आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयलाई जनमुखी कसरी बनाउने ? यी तीनै तहका शिक्षाबारे प्रत्यक्ष रूपमा मैले काम गर्न पाएको छु । त्यसैले आफूलाई लागेका कुरा यहाँ लेखेको छु ।